Madaxweynaha Aktaş Asphalt Shaqaalaha Ayaa Sahur | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaMadaxweynaha Aktaş Asphalt Shaqaalaha Ayaa Sameeyay Sahur
madaxweynaha aktas wuxuu sameeyey sahur isaga iyo shaqaalaha asphalt
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay u rogtay bandoowyada sabtida iyo axadda sababa la xiriira cudurka faafa cudurka 'corona virus' fursado waxayna bilaabeen inay ka go'doomaan halbowlaha waaweyn ee aan dib loo cusbooneysiin 15-20 sano.
Si looga hortago faafitaanka cudurka faafa ee corona, Dowlada Hoose ee Magaalada, oo dadaal badan ku bixisay bixinta cunnada kulul, qodobada iyo baahida suuqa ee loogu talagalay muwaadiniinta uu saameeyay cudurku, waxay sii wadeysaa dib u cusbooneysiinta wadooyinka waaweyn ee aan sanado badan la haynin. Dawladda Hoose ee Magaalada, oo u rogay bandoowga lagu soo rogay sabtida iyo axadda ilaa 30ka Abriil ee ku yaal 11 magaalo magaalo iyo Zonguldak, inay u noqdaan fursad taariikhi ah, waxay sii wadaysaa howlihii qalooca ahaa ee laga bilaabay dhammaan halbowlayaasha waaweyn meesha aysan suurta gal aheyn inay soo farageliyaan culeyska taraafikada waqtigii caadiga ahaa. Dhamaadka 5-tii toddobaad ee la soo dhaafay, ku dhawaad ​​1 kun oo tan oo ah shaqo-tuurid dusheed ayaa la fuliyay inta u dhexeysa T3, T11 tareenka, Setbaşı, Yeşil, Gökdere, 50 Eylül Boulevard Samanlı Köprülü iyo isgoyska Vakıf iyo Merinos - Qalabka.
Jinsiga In ka Badan Waqtiga
Kooxuhu waxay la tartamaan waqtiga si ay ugu haboonaadaan shaqada socon doonta 10 maalmood usbuucii haddii ay dhacdo marxalado isdaba-joog ah, halkaasoo taraafikada aysan suuragal u ahayn inay ku shaqeeyaan oo ay ku shaqeeyaan xaaladaha caadiga ah. Dawladda Hoose ee Magaalada, oo dhammeystirtey shaqada cusboonaysiinta ee loo yaqaan 'aspalt cusboonaysiinta' ee jihada Merinos - Acemler, oo ah wadnaha ficillada taraafikada Bursa usbuucii hore, kaas oo qaatay 2 maalmood oo bandoow ah maalinta shaqaalaha, ayaa bilaabay shaqo qandho ah jihada imaatinka usbuucan. Kooxahan, oo garoonka soo degay daqiiqaddii ugu horreysay ee xayiraadda ay bilaabatay, waxay sidoo kale dhammaystireen shaqooyinkoodii jihada imaanshaha iyagoo leh socod shaqo oo joogto ah iyagoon dhaarin habeen iyo maalin.
Wadada Sahur ee Shaqaalaha
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Caalin Alinur Aktaş wuxuu baarey shaqooyinka sii socda iyagoon kala go ’lahayn dhanka jihada Acemler Merinos. Helitaanka macluumaadka ku saabsan shaqooyinka, Madaxweynaha Aktaş wuxuu la kulmay shaqaalaha miiska sahur oo loo diyaariyay wadada dhinaceeda. Isaga oo la hadlaya shaqaalaha, ayuu Madaxweyne Aktaş sidoo kale la cunay casho sahur ah shaqaalaha. Isagoo caddeeyay inay ku qaataan waqti shaqo oo culus si ay u kordhiyaan raaxada dadka Bursa, Duqa magaalada Aktaş ayaa yidhi, "In kasta oo aannaan qorsheyneynin muddada dhow, waxaan si firfircoon uga shaqeyneynaa bandowyada lagu dabaqay 4-5 toddobaad. Wadooyinkaani waa wadooyin nool 7/24. Dabcan, haddii aan joojinno taraafikada waddooyinkaan oo aan qabanno shaqadan, rumeyso inay qaadaneyso bilooyin, ma ahan maalmo. Dadkeenu way dhibaatoobaan oo tayada shaqada ma fiicnaan laheyd. Dareenkan, asxaabteena ka shaqeysa 7/24 waxay muujiyeen dadaal aad u weyn wadooyinka kuwaas oo ah xudunta ugu weyn ee Bursa. Waan u mahadcelinayaa dhammaantood. ”
50 Kun Konton Asphalt
Markii la siinayo macluumaadka ku saabsan shaqada asphalting gaar ahaan hanaanka corona, Duqa magaalada Aktaş wuxuu carrabka ku adkeeyay in dahaarka qashin-ka-goyska ee 15-kiiloomitir laamiga iyo buuxinta iyo buuxinta shaqada wadada 10-kiiloomitir aan la samayn. Isagoo sheegay in ku dhawaad ​​50 kun oo tan oo aasaaska ah lagu isticmaalay shaqooyinkan, Duqa Magaalada Aktaş wuxuu yiri, “Nidaamkan kaliya, wadar dhan 25 kiiloomitir oo wadooyin ah ayaa loo dejiyay gaadiidleyda dadka degan Bursa. Hawshan, waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahad celiyo muwaadiniinteena dareenka ay ka qabaan dagaalka feyruska corona. Mar alla intaad guriga joogtid, waxaan jeclaan lahaa inaan idin xasuusiyo annaga oo ah Dawlada Hoose ee Magaalo-weyn waxaan ku wadnaa socodsiinta habka xawaare buuxa, annaga oo haysanna caawimaad bulsho iyo taageero, ”ayuu yidhi.
Aktas Holding wuxuu ku kori doonaa nidaamka tareenka iyadoo la isticmaalayo maalgashi cusub
11 Sebtember Boulevard Samanlı Bridge Isweydaarsiga
Bilowga Merino wadada
Asphalt ilaa khadadka taraamyada Bursa
Duqa magaalada Aktaş: 'Waan xallin doonaa dhibaatooyinka basaska'
Duqa Aktaş: "Marka gaadiidku istaago, biyaha socdaa waxay istaagaan"